Ogaden News Agency (ONA) – Go’aamadii & Baaqii Kalfadhigii 7aad ee Golaha Dhexe ee JWXO+Sawiro
Go’aamadii & Baaqii Kalfadhigii 7aad ee Golaha Dhexe ee JWXO+Sawiro
Go’aamadii & Baaqii Kalfadhiga 7aad ee Golaha Dhexe ee JWXO
Kalfadhigii 7aad ee Golaha Dhexe ee Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya (JWXO) oo socday intii u dhaxaysay 15-23/ 03/2017 ayaa ku soo dhamaaday guul. Shirka oo uu furay Guddoomiyaha JWXO Admiral Maxamed Cumar Cismaan, ayuu Guddoomiyuhu si dhamaystiran uga warbixiyay xaaladda uu halganku ku sugan yahay iyo duruufaha ku xeeran, iyo xaaladda guud ee gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan Gumaysiga Itoobiya iyo halka uu maanta taagan yahay. Dhinaca siyaasadda,dhaqaalaha iyo ciidanka.
Warbixintaa ka dib wuxuu Gudoomiyuhu ku baraarujiyay xubnaha ahmiyadda uu Kalfadhigu u leeyahay horumarinta hawlaha kala duwan ee Jabhadda iyo guud ahaan halganka ka socda Ogaadeenya. Wuxuuna ka codsaday inay ka soo saaraan go,aamo waxtar u leh halganka oo marxaladda cusub ee ka taagan geeska afrika la jaanqaadi karaysa. Kalfadhigu wuxuu tixgalin iyo mudanaan gaar ah siiyay talooyinkii ka soo baxay shirarkii wadatashiga ee jaaliyadaha ogaadeenya ay ku qabteen dunida dacaladeeda.
Kalfadhiga waxaa lagu falanqeeyey ajendayaal mug wayn, waxaana kuwii ugu muhiimsanaa ka mid ahaa:
1. Qiimaynta Curiyayaasha saamaynta ku leh xaaladda gudaha Ogaadeenya.
2. Warbixinta Hoggaamadda iyo qiimaynta wax qabadka hay’adaha kala duwan ee Jabhadda intii ka danbaysay kalfadhigii 6aad ee Golaha Dhexe.
3. Qiimaynta Curiyayaasha dibadda ee saamaynta ku leh halganka Ogaadeenya.
4. Dejinta barnaamijka iyo istaratiijiyada guud ee halganka labada sano ee soo socota.
5. Dib u eegidda iyo ansixinta xeerarka kala duwan ee ururka iyo dhamaystirka wixii qabya ahaa.
6. Qiimaynta mucaaradka itoobiya
Kalfadhigu wuxuu si mug leh u qiimeeyay waxqabadka hay’adaha Jabhadda, xaaladaha iyo duruufaha Caalamiga ah iyo kuwa Gobaleed ee saamaynta ku leh halganka xaqa ah ee shacbiga Somaalida Ogaadeenya. Wuxuu si qodo-dheer uga dooday kor u-qaadidda tayada waxqabad ee hay’adaha kala duwan ee Jabhadda, isagoo mudnaan gaar ah siiyay:
 Xoojinta hawlgalada Ciidanka Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya (CWXO) ee la ambaqaadi doona Istraatiijiyada cusub ee halganka loo dajiyay.
 Horumarinta abaabulka iyo ka hortagga shirqoolada gumaysiga.
 Xoojinta iyo kor u-qaadista hawlaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda.
 Xoojinta iyo tayaynta Warfaafinta halganka.
 Taabba-galinta qorshayaasha wacyi gelineed ee shacabka Soomalida Ogaadenya.
 Xoojinta iskaashiga iyo wax wada qabsiga xoogagga mucaaradka ku ah taliska ka taliya Addisababa.
Wuxuu Goluhu ammaan u soo jeediyay CWXO, ka dib markii la xaqiijiyay inuu si lagu diirsaday u gutay waajibaadkisii qaran ee ku aadanaa xoraynta dalka Ogaadeenya. Wuxuu sidoo kale Goluhu bogaadin u soo jeediyay shacbiga geesiga ee Ogaadeenya, oo u dhabar adaygay xasuuqa iyo denbiyada bani’aadamnimada ka dhanka ah ee gumaysigu ku hayo, kuna mintiday qadiyadiisa xaqa ah ee xoraynta Ogadenya. Waxaa kaloo ammaan loo soo jeediyay Jaaliyadaha Ogadenya oo qayb libaax ka qaata halganka shacabka S.Ogadenya si loo bogayna ugu jilib-dhigay, fashiliyayna qorshayaashii gumaysigu ugu talagalay inuu bulshada ku jaha-wareeriyo kuna kala qaybiyo, halgankana ku majara-habaabiyo.
Goluhu wuxuu qiimayn mug leh ku sameeyay qorshayaasha cusub ee gumaysiga Itoobiya ku doonayo inuu ku jahawareeriyo caalamka isagoo ka been sheegaya qadiyada Ogadenya iyo halganka uu shacabka Somalida Ogadenya ku doonayo Xaqiisa Aaya-Ka-Tashi.
Goluhu markuu qiimeeyay xaaladda Itobiya, xoogaga mucaaradka ku ah Taliska Itobiya iyo Jabahadaha Gobanimadoonka ah, wuxuu go’aamiyay in la sii xoojiyo iskaashiga ka dhaxeeya JWXO iyo Xoogagaa.
Dood dheer iyo falanqayn ka dib:
1. Wuxuu Goluhu dajiyay Istraatiijiyad cusub oo ku haboon marxaladda uu marayo Halganka Gobanimadoonka ah ee shacabka S.Ogadenya.
2. Goluhu wuxuu xoojiyey mawqifka asaasiga ah ee JWXO oo ah, si daganaansho la,aanta geeska afrika xal waara loogu helo waa in la oggolaado Xaqa Aayo-ka-Talinta shacbiga Soomalida Ogaadenya.
3. In la dardargaliyo lana xoojiyo hawlgalada CWXO, iyadoo la adeegsanayo taba cusub oo ku salaysan duruufta uu ku sugan yahay cadawga.
4. In kor loo qaado heerka abaabulka iyo wacyigalinta shacabka S.Ogadenya Gude iyo Dibadba, iyadoo la adeegsanayo xirfad iyo aqoon.
5. Ina la isgarabtaago kacdoonada ka socda itoobiya, dadwaynaha soomaalida ogaadeeniya lagu dhiiri galiyo inay kaalin muuqata ka qaataan.
6. In loo hawlagalo sidii loo taaba galin lahaa barnaamijyadda siyaasadeed ee isbahaysiga PAFD.
7. In la xoojiyo xidhiidhka walaaltinimo een la leenahay shacbiga Soomaaliyeed
8. In la sii xoojiyo xidhiidhka sokeeye een la leenahay dhamaan shucuubta caalamka ee jecel cadaaladda, sinaanta iyo xoriyadda.
9. In la sii xoojiyo xidhiidhka walaaltnimo iyo wax wada qabsi ee ka dhaxeeya labada shacab ee Soomalida Ogaadenya iyo shacabka Ereteriya.
 Wuxuu Goluhu ugu baaqayaa shacbiga geesiga ah ee Soomaalida Ogadenya inay si mintidnimo ah u laban laabaan halgankooda xaqa ah, isla markaasna ka digtoonaadaan, kana hor tagaan shirqoollada iyo siyaasadda kala qaybinta ah ee gumaysiga Itoobiya wado.
 Goluhu wuxuu beesha caalamka ugu baaqayaa inay shacbiga Ogadenya ku taageeraan qadiyadiisa xaqa ah, isla markaana gumaysiga Itobiya kala xisaabtamaan denbiyada dagaal iyo denbiyada banai’aadamnimada ka dhanka ah ee uu ka galayo shacbiga dulman ee Ogadenya.
 Waxaa ogaadeenya ka jira cudurka daacuunka oo maalin walba ay u dhintaan dad tiro badan,iyo abaaraha oo galaaftay dad iyo duunyoba .sidaa darteed Goluhu wuxuu beesha caalamka ugu baaqayaa inay gurmad iyo taakulo dagdag ah gaadhsiiyaan.
 Goluhu wuxuu ugu baaqayaa shucuubta ka soo horjeeda gumaysiga itoobiya ee kacdoonada wada inay muruqooda iyo maalkooda mideeyaan si loo soo dadajiyo higsiga shucuubta.
 Goluhu wuxuu shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliya ugu baaqayaa inay sii xoojiyaa kacdoonka wadaninimo ee ka abuurmay dalka soomaaliya,kana shaqeeyaan sidii ay u soo afjari lahaayeen faragalinta shisheeye ee lagu dhaawacayo danaha qarankooda.
 Goluhu wuxuu maamulada Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay joojiyaan u gacangalinta cadawgooda muwaadiniinta S.Ogaadenya ee qaxootinimada ama nabadgalyada u soo raadsaday degaanadooda. Sidoo kale, wuxuu ugu baaqaynnaa inay ku taageeraan walaalahooda S.Ogadenya halganka Gobanimadoon.
kalfadhigu markuu dhagaystay warbixino iyo xogo kala duwan wuxuu cambaareeyay
 Xasuuqa aan aabayeelka lahayn iyo denbiyada bani’aadamnimada ka baxsan ee gumaysiga Itoobiya uu kula kacayo dadwaynaha aan waxba ka galabsanin ee Ogadenya iyo shucuubta kale ee Itoobiya.
 Cunaqabataynta dhaqaale, siyaasadeed, dhaq-dhaqaaq, ganacsi iyo warfaafineed ee gumaysiga Itoobiya uu saaray dalka iyo dadka Ogadenya taasoo dhibaatooyin badan soo gaadhsiisay dadwaynaha rayidka ah ee Ogadenya.
 Sida uu u qarinayo dhibaatooyinka ka dhashay abaaraha iyo cudurada faafa ee ka jira ogaadeeniya, una hor istaagay guramadkii iyo taakulayntii la gaadhsiin lahaa shacbiga tabaalaysan.
 Maamulada Jamhuuriyadda Soomaliya ka tirsan ee u gacan galiyey gumaysiga Itoobiya muwaadiniinta S.Ogadenya een waxba galabsan oo goobahaas qaxootinimo ku joogay.
Midnimo, Mintid, Iskutashi, Guul